Ifundani i-anthropology? | Ukwakheka kanye nezifundo
UMaite Nicuesa | 30/12/2021 10:00 | Izifundo
Ifundani i-anthropology? Kunamagatsha ehlukene olwazi lapho umuntu ethulwa njengesihloko futhi, futhi, njengento. I-anthropology iyisibonelo salokhu. Isiyalo esinikeza ulwazi olukhuthaza ukuqonda nolwazi lomuntu, imvelo yakhe kanye nokuhlanganiswa kwakhe emphakathini. Ukuba khona komuntu kungagcizelela izici ezehlukene ezifana nesiko, izibopho phakathi kwabantu, amasiko noma ubuciko. Iqiniso lomuntu lithola imibono ehlukene ngokombono wenhlalo-mpilo.
I-biography yomuntu siqu yomuntu oyingqayizivele futhi ongaphindi ifakwe endaweni lapho kukhona khona izinkambiso, izindinganiso namasiko. Izimo zomongo azinqumi inkululeko yangaphakathi yesihloko. Kodwa ziyingxenye ye-biography yakhe. I-anthropology ixhumene eduze nefilosofi. Amandla okumangala nokufunda ayisihluthulelo sokubheka iqiniso ukusuka ekuhlonipheni kuya kokuhlukile. Lokho okuthathwa njengemihla ngemihla emkhathizwe womuntu akuchazi jikelele ubuqiniso babantu kanye nezimo zabo.
1 Ukuhlaziywa kobuntu, umphakathi namasiko
2 Ukubaluleka kwe-anthropology emphakathini wanamuhla
Ukuhlaziywa kobuntu, umphakathi namasiko
Ukuqonda izenzo nendlela yokwenza komuntu akukwazi nje ukwazisa inkululeko yomuntu siqu, kodwa futhi kubhekisela kumongo. Ngenxa yazo zonke lezi zizathu, i-anthropology ayigcini nje ngokunikeza ukukhanya ngengqikithi yomuntu ngamunye. Kodwa ucwaningo luphinde lunikeze izimpendulo mayelana namaqembu omphakathi ahlukene kanye nezici zabo.
Kunama-nuances ahlukene athola incazelo yawo kumongo weqembu noma isiko. Ngokwesibonelo, amasiko nezimpawu. Ukuthintana nendawo kukhuthaza isipiliyoni, ukufunda kanye nokulinganisa imiqondo. Izinkulumo zesiko nazo zidluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane njengoba kuboniswa indima yesiko elidluliselwa ngomlomo noma ukuphelezelwa komndeni.
Nge-anthropology yenhlalo kungenzeka ukubona ukuguquguquka komuntu kuwo wonke umlando. Ngale ndlela, ucwaningo luphinde lugcizelele ukuhlonzwa komehluko nezici ezigcinwa ezimeni ezahlukene. Isiko nalo lihlobene nendlela yokuphila, izinkolelo, izindinganiso, izinhlobo zobudlelwane bomphakathi kanye nokuxhumana.
Ukubaluleka kwe-anthropology emphakathini wanamuhla
Izinguquko zezenhlalo nazo zinethonya kumuntu. Okuthile okubonakala kumongo wobhubhane okuholele ekufundweni kwemikhuba emisha efakwe ngokuphelele endleleni yokuphila. Futhi, ngakolunye uhlangothi, inqubo yokuzivumelanisa noshintsho nayo ishiye ngemuva izinqubo ezisungulwe kahle. Izinhlobo zobudlelwano bomphakathi kanye nendlela yokubona ukuhlangana nabanye zishintshile. Ngakho, I-Anthropology isiyalo esidlala indima ebaluleke kakhulu namuhla.
Ngakolunye uhlangothi, ubuqiniso bomuntu abukhiwe nje kuphela endaweni yangaphandle, kodwa futhi buhambisana nokunotha kwezwe elingaphakathi. Umcabango, imizwa, imizwa kanye nokucabanga kuyingxenye yemvelo yomuntu. Zonke izithako ezishiwo zinethonya empilweni yansuku zonke kanye nokwenza izinqumo.
Umuntu ngamunye unengqikithi yakhe ngoba ihlukile futhi ayiphindi. Kodwa-ke, lihlanganyela izici ezifanayo neqembu eliyingxenye yalo kanye nabanye abantu. I ukuqonda kwe-anthropological yemvelo yomuntu inikeza ulwazi olusiza ukuzazi kanye nokuzihlola.
Ngakho-ke, imiphakathi eyahlukene iveza ukuhlukahluka okukhona. Ungathanda ukuba yisazi sesayensi yezinto eziphilayo? Ingomunye wemisebenzi ebaluleke kakhulu namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Ifundani i-anthropology?
Iyini i-baccalaureate yamazwe ngamazwe?